स्यानिटाइजरले स्वास्थ्यमा के अ’सर गर्छ ? प्रयोग गर्नु फाइदा कि बे’फाइदा ? «
प्रकाशित मिति : 25 September, 2020 5:20 pm
विश्वजगत नै को’भिड-१९ को म’हामा’रीबाट प्रभावित भईरहँदा नेपाल पनि यस महामा’रीको च’पेटाबाट बच्न सकेको छैन। दिन प्रतिदिन को’भिड-१९ को सं’क्रमणले उचाइ छोइरहँदा झन्-झन् जनमानसमा यसको शि’कार भइने त्रा’स बढ्दै गएको छ। को’भिड-१९ को सं’क्रमणबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले निर्देशिका नै तयार गरी बारम्बार जनसमुदायमा यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। यस सं’क्रमणबाट जोगिन र यसलाई फैलन नदिनको लागि सामाजिक स्थलमा दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने र बारम्बारको अन्तरलमा साबुन पानीले हात धुने या सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने।
हाल बजारमा सेनिटाइजरको उपभोग धेरै नै बढेको देखिन्छ। यस्ता सेनिटाइजरहरु साबुन पानी नभएको ठाउँमा निकै उपयुक्त हुन्छन्। जता पनि बोकेर हिड्न मिल्ने अनि कम समय मात्र प्रयोग गर्दा पनि प्रभावकारी हुने हुनाले यस्ता सेनिटाइजरको माग बढेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सेनिटाइजर उत्पादनको लागि सेनिटाइजर फर्मुलेशनको मापदण्ड नै तोकिदिएको छ। जसमा दुई प्रकारका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ८०% र आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ७५% साथ साथै ग्लिसरोल १.४५% र हाइड्रोजन पेरोक्साइड ०.१२५% हुनपर्दछ। तर बजारमा तोकिएको मापदण्ड बि’परित अन्धाधुन्ध ढंगले वि’षाक्त रसायन जस्तै मे’थानोलको प्रयोग गरी स्थानीय तहमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर उत्पदान भैरहेको र न’रोकि’एको पाइएको छ।
यस्ता ढंगबाट तयार भएको सेनिटाइजरले स्वास्थ्यमा ठाडै न’राम्रो असर पार्दछ। मे’थानो’ल नामक सो रसायनले स्वास्थ्यमा ग’म्भीर असर पार्दछ। यसले छालाको सतहबाट शोषित भइ शरीरमा प्रवेश गरी श्वासप्रश्वासमा स’मस्या निम्ताउने, टाउको दुखाउने र धेरै मात्रामा शरीरमा प्रवेश गरेको खण्डमा त झन् आँखाको ज्योति समेत गुमाउनु पर्ने साथसाथै मृत्युको मुखमा पुर्याउने ख’तरा समेत हुन्छ।अन्य विभिन्न रसायन जस्तै हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनोलहरु प्रभावकारी भएता पनि लामो समयसम्म प्रयोगमा ल्याईराख्दा यसले स्वास्थ्यमा अ’सर नपार्ला भन्न सकिन्न। केही समय अघि विभिन्न स्थानहरुमा की’टाणुशो’धनको नाममा हा’इपोक्लोराइट र अन्य केही र’सायन शरीरमा छर्किएको देखियो जुन सरासर गलत अभ्यास हो। यसले गर्दा छाला सुक्खा बनाउने, छाला चिलाउने चर्कने र फुट्ने स’मस्या देखा पर्दछन।
यसले श्वासप्रश्वासमा पनि सिधैँ अ सर गर्दछ, झन् ठाडै आँखामा पर्नाले आँखा चिलाउने, पोल्ने र रातो हुने समस्या सँगसँगै अन्य ग म्भीर स मस्या पैदा गर्दछ। अझ यस्ता हानिका’रक र’सायन युक्त सेनिटाइजरले स-साना बालबालिका बढी प्र’भावित हुने गर्दछन। बजारमा बासनायुक्त लोभ्याउने सेनिटाइजर उपलब्ध हुनाले त झन् बालबालिकाले स्वादका लागि खाइदिन पनि सक्ने हुनाले निकै जो’खिम निम्त्याइरहेको छ। बजारमा पाइने यस्ता मापदण्ड विपरित तयार भएका सेनिटाइजरले स्वास्थ्यमा न’राम्रो प्रभाव पार्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले गुणस्तरहीन सेनिटाइजरमा प्र’तिबन्ध लगाउनु पर्दछ। र’सायनयुक्त सेनिटाइजर प्रभावकारी भएता पनि स्वास्थ्यका लागि जो’खिमपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले गुणस्तर मान्यता प्राप्त सेनिटाइजर मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ। साबुन पानीले हात बारम्बारको अन्तरालमा धुनुलाई नै प्राथमिकता दिनुका साथसाथै सकेसम्म सेनिटाइजरको प्रयोग कम गर्नु नै फाइदाजनक देखिन्छ।